စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရှေ့မှာ တစ်ထောင့်တစ်ည အကြာ (တာဝန်ရှိသူတွေ ကူညီကြပါဦး) - 9style
Home/နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ/စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရှေ့မှာ တစ်ထောင့်တစ်ည အကြာ (တာဝန်ရှိသူတွေ ကူညီကြပါဦး)
စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနရှေ့မှာ တစ်ထောင့်တစ်ည အကြာ (တာဝန်ရှိသူတွေ ကူညီကြပါဦး)
TjrxgWfzULaCgCdvDE September 5, 2019
ပြောင်းလဲချိန်မတန်သေးလို့လား စီပွား/ကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ခင်များကုမ္ပဏီ အသစ် အတွက် ထသက အသစ်လျောက်တာ 9:30 မှ ဖွင့်တဲ့ရုံးကို မနက် 7:00 ကတည်းက2နာရီ ခွဲ လောက် ရုံးအပြင်မှာ မတ်တပ်ရပ် တန်းစီရတယ်။ ရုံးအထဲရောက်တော့ Sr နံပါတ်ပေးတယ်။ ညနေရောက်တော့ ဒီနေတင်တဲ့ File တွေ မနက်ဖြန်မှ စစ်ပေးနိုင်မယ်တဲ။ြ ပန်ပေတော့။နောက် ၁ ရက်ငွေသွင်းရတယ်။ ထသက ကဒ် ကတော့ မနက်ဖြန်မှလာထုတ်တဲ့။
ဒီနေ့တော့ ထသက ကဒ် ရခဲ့ပါပြီ။ DICA ရုံးမှ နာရီပိုင်းနဲ့ တည်ထောင်ပေးလိုက်တဲ့ Company တစ်ခုကို စီးပွား ကူသန်း မှာ ထသက မှတ်ပုံပြန်တင်တာကို (ရုံးပိတ်င်္က်မပါ)၃ ရက်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ ထသက မှတ်ပုံတင်တဲ့ Process က Company တည်ထောင်တဲ့ process ဘာတွေများ ပိုမိုကြီးကြယ်နေလို့လဲ ?
တကယ်တန်းတော့ ထသက မှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုတာ DICA က ခွင်ပြု့ပေးခဲ့တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် စီးပွါးကူသန်းဝန်ကြီးဌာန Computer System အတွင်းသို့ DICA မှ ခွင့်ပြုထားတဲ့ Company အချက်အလက် Data များကို ရိုက်သွင်းတဲ့ Data Entry အဆင့်သာသာ အလုပ်တစ်ခုပါ။ ပုဂ္ဂလိက Bank များတွင် Bank စာရေးများ တစ်ဦးတည်း လုပ်တဲ့ အလုပ်ပုံစံမျိုး အလုပ်ပါ။
ထိုကဲ့သို ရိုးစင်းလှတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ပုံကြီးချဲ့ ခက်ခဲအောင် လုပ်နေတဲ့ စီပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနအောက်မှ ထသက ဌာနခွဲမှ တာဝန်ရှိအရာရှိများ ကျစ် မြဲ ရစ်မြဲ ပါဘဲလား? ၄င်းတို့ကတော့ အခုလို ကြာရတာဟာ ကုမ္ပဏီအဟောင်း တွေ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် အသစ်ကို နောက်ဆုံးအချိန်ကပ်မှ စုံပြုံ လာရောက် Update လုပ်တာကြောင့်လို့ အကြောင်းပြပါတယ်။သို့သော် ထိုသူတွေကြောင့်ဆိုလျှင်လည်း ပုံမှန် လျှာက်ထားသူတွေ အဆင်ပြေအောင် ဝန်ကြီးဌာန တစ်ခုအနေနဲ့ စီစဉ်ပေးရမယ့်အစား အားလုံးကို ဝါးလုံးချီးသုတ်ရမ်းသလို သိမ်းကျုံးပတ်ရမ်းတာတော့ မကောင်းပါဘူး စီပွားကူသန်းရယ်။Credit-Aung Tun၊ Photo – Wanna
ပွောငျးလဲခြိနျမတနျသေးလို့လား စီပှား/ကူးသနျးဝနျကွီးဌာန ခငျမြားကုမ်ပဏီ အသဈ အတှကျ ထသက အသဈလြောကျတာ 9:30 မှ ဖှငျ့တဲ့ရုံးကို မနကျ 7:00 ကတညျးက2နာရီ ခှဲ လောကျ ရုံးအပွငျမှာ မတျတပျရပျ တနျးစီရတယျ။ ရုံးအထဲရောကျတော့ Sr နံပါတျပေးတယျ။ ညနရေောကျတော့ ဒီနတေငျတဲ့ File တှေ မနကျဖွနျမှ စဈပေးနိုငျမယျတဲ။ွ ပနျပတေော့။နောကျ ၁ ရကျငှသှေငျးရတယျ။ ထသက ကဒျ ကတော့ မနကျဖွနျမှလာထုတျတဲ့။
ဒီနတေ့ော့ ထသက ကဒျ ရခဲ့ပါပွီ။ DICA ရုံးမှ နာရီပိုငျးနဲ့ တညျထောငျပေးလိုကျတဲ့ Company တဈခုကို စီးပှား ကူသနျး မှာ ထသက မှတျပုံပွနျတငျတာကို (ရုံးပိင်္တျကျမပါ)၃ ရကျလောကျကွာတယျဆိုတော့ ထသက မှတျပုံတငျတဲ့ Process က Company တညျထောငျတဲ့ process ဘာတှမြေား ပိုမိုကွီးကွယျနလေို့လဲ ?
တကယျတနျးတော့ ထသက မှတျပုံတငျတယျဆိုတာ DICA က ခှငျပွု့ပေးခဲ့တဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုကို ထုတျကုနျသှငျးကုနျလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျ စီးပှါးကူသနျးဝနျကွီးဌာန Computer System အတှငျးသို့ DICA မှ ခှငျ့ပွုထားတဲ့ Company အခကျြအလကျ Data မြားကို ရိုကျသှငျးတဲ့ Data Entry အဆငျ့သာသာ အလုပျတဈခုပါ။ ပုဂ်ဂလိက Bank မြားတှငျ Bank စာရေးမြား တဈဦးတညျး လုပျတဲ့ အလုပျပုံစံမြိုး အလုပျပါ။
ထိုကဲ့သို ရိုးစငျးလှတဲ့ အလုပျတဈခုကို ပုံကွီးခြဲ့ ခကျခဲအောငျ လုပျနတေဲ့ စီပှားကူးသနျးဝနျကွီးဌာနအောကျမှ ထသက ဌာနခှဲမှ တာဝနျရှိအရာရှိမြား ကဈြ မွဲ ရဈမွဲ ပါဘဲလား? ၎င်းငျးတို့ကတော့ အခုလို ကွာရတာဟာ ကုမ်ပဏီအဟောငျး တှေ ကုမ်ပဏီမှတျပုံတငျအမှတျ အသဈကို နောကျဆုံးအခြိနျကပျမှ စုံပွုံ လာရောကျ Update လုပျတာကွောငျ့လို့ အကွောငျးပွပါတယျ။သို့သျော ထိုသူတှကွေောငျ့ဆိုလြှငျလညျး ပုံမှနျ လြှာကျထားသူတှေ အဆငျပွအေောငျ ဝနျကွီးဌာန တဈခုအနနေဲ့ စီစဉျပေးရမယျ့အစား အားလုံးကို ဝါးလုံးခြီးသုတျရမျးသလို သိမျးကြုံးပတျရမျးတာတော့ မကောငျးပါဘူး စီပှားကူသနျးရယျ။Credit-Aung Tun၊ Photo – Wanna
ဆိုင်ဖွင့်ထဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲ ဝယ်သူတွေအပေါ်စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပိုးထည်တွေရောင်းပေးနေတဲ့ စိုးညီအစ်မလေးဖော်
သူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကောင်မလေးကို ပရိတ်သတ်ရှေ့လက်တွဲ ခေါ်လိုက်တဲ့ စိုင်းစိုင်း